ထိုင်းနိုင်ငံ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း ဆရာ၊ဆရာများ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ကျင်းပ	Posted on October 12, 2013	by bmta05 ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တာခ့်ခရိုင်အတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်း ဆရာ၊ဆရာမများ ညီလာခံနှင့် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့က မဲဆောက်မြို့ မယ်တော်ဆေးခန်း၏ သင်တန်း ခမ်းမဆောင်တွင် မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာများ အစည်းအရုံး (BMTA) မှ ဦးဆောင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြရာ ထိုင်းနိုင်ငံဒေသ အသီးသီးမှ ပညာရေး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆရာ၊ဆရာမ စုစုပေါင်း ၇၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
This entry was posted in Action movement, လှုပ်ရှားမှုများ and tagged ပညာရေး. Bookmark the permalink.	← NNER နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးညီလာခံ ၂၀၁၃ အစီရင်ခံစာ